शारीरिक सुखभोगका क्रममा पुरुषले गर्ने ४ गल्ती ! – Jagaran Nepal
शारीरिक सुखभोगका क्रममा पुरुषले गर्ने ४ गल्ती !
एजेन्सी । दाम्पत्य जीवन सुखी र खुसीसँग बिताउनको लागि शारीरिक सुखभोग निकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । सुखमय जिवनका लागि शारीरिक सुखभोगलाई एक महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ । महिला पुरुष दुवैमा उत्तिकै चाहना भएमा मात्रै दुवै सन्तुष्ट हुन सक्छन् । तर कतिपय पुरुषहरु सम्बन्ध राख्नु अगाडी महिलासँग सहमति लिन चाहदैनन् । पुरुषहरु महिलालाई एकपटक नसोधी पटक पटक सम्पर्क राख्न चाहन्छन् । महिला भन्दा बढी पुरुषहरु नै सम्पर्क राख्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै शैलीको कारण पुरुषहरुले थुप्रै किसिमका गल्तीहरु गर्छन् ।
यस्ता छन् पुरूषले गर्ने गल्ती
सामान्यतया अधिकांश पुरुषहरु ओछ्यानमा पुग्ने साथ सम्बन्ध राख्न हतार गर्छन् । तर महिलाहरु शारीरिक सुखभोग अगाडी कही रमाइला पलहरु चाहन्छन् । जस्तो कि चु’म्बन गर्ने, अंगाले मार्ने हात सु’म्सुम्याउने । तर पुरुषहरु यस्ता कुरामा ख्याल नगरी शारीरिक सुखभोगमा हतारिन्छन् ।
कतिपय पुरुषहरु सम्बन्ध कायम गर्नु अगाडी आफ्नो पार्टनरसँग सहमति लिन चाहदैनन् । जबकी सम्पर्कको समयमा दुवैलाई उत्तिकै चाहना हुनु आवश्यक हुन्छ । जसले दुवैलाई आनन्द महसुस बनाउन सक्छ । कहिले काही महिलाहरु तनावमा रहेका हुन्छन् । यद्यपी यस्ता कुरामा पुरुषहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । जबकी आफ्नो मात्र इच्छामा दगुर्नु हुँदैन् ।
पुरुषहरुले शारीरिक सुखभोगमा मात्र जोड दिने भएकाले सम्पर्क भन्दा अगाडीको समयमा फोर प्लेको अत्याधिक आवश्यकता हुन्छ । तर पुरुषहरुको सम्पूर्ण ध्यान शारीरिक सुखभोग राख्नु गलत हुनजान्छ ।
शारीरिक सुखभोगअघि सुरक्षा बारेमा बुझ्नु होसियार हुन जरूरी छ । यसबाट बहुआयामिक खतरा हुने हुँदा आवश्यकता अनुसार अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । सम्बन्ध राख्नु अगाडी अपनाइने सुरक्षाले सन्तोषपूर्ण र भावनात्मक सम्बन्धको आधार बनाउँछ । तर धेरेजसो पुरुषहरु यस्तो विषमा बेखबर हुन्छन् । उनीहरुको ध्यान मात्र शारीरिक सुखभोगमा केन्द्रित हुन्छ । यस्लाई राम्रो मानिदैन् ।